Abathengisi be-B2B Kufanele Banyuse Kanjani Amasu Abo Okumaketha Okuqukethwe | Martech Zone
Njengoba siqhubeka nokuxoxisana nabaholi bezokumaketha, sicwaninga izitayela eziku-inthanethi, futhi sibona imiphumela yemizamo yethu yokusiza amaklayenti ethu, akukho kungabaza mayelana namandla wokukhangisa okuqukethwe kwemizamo yokuthola ye-B2B. Amabhizinisi acwaninga ukuthenga kwawo okulandelayo ku-inthanethi kunanini ngaphambili.
Inkinga, noma kunjalo, ukuthi izinkampani zikhiqiza okuqukethwe okungasebenzi kangako. Lapho abathengisi be-B2B abaphumelelayo bebuzwa ukuthi kungani ukumaketha kokuqukethwe kwabo kusebenza, ama-85% athola amaphuzu ikhwalithi ephezulu, okuqukethwe okusebenza kahle kakhulu ukudalwa phezulu. Siyaqhubeka nokuPhusha a umtapo wokuqukethwe thintana namakhasimende ethu lapho sibhala khona amathuba nezikhala kokuqukethwe kwawo, futhi sisebenzela ukukhiqiza isihloko esichaziwe, sekhwalithi ephezulu yezihloko.
Indlela yokuthengisa enamasu igxile ekwakheni nasekusabalaliseni okuqukethwe okuyigugu, okufanele, nokungaguquguquki ukuheha nokugcina izithameli ezichazwe kahle - futhi, ekugcineni, ukushayela isenzo samakhasimende esinenzuzo.
Ama-47% wabakhangisi be-B2B bathe banezinselelo ekunikeleni ngezinsizakusebenza kucebo labo lokumaketha okuqukethwe Sibona lokhu futhi namakhasimende ethu futhi sisebenzele ukwenza lula izinqubo zokwehlisa umthwalo kumakhasimende ethu.
Isibonelo, sineklayenti elilodwa esiluhlelela ekuseni njalo ngenyanga ukuqopha ama-podcast amaningi. Ngasikhathi sinye, siphinde siwarekhode kuvidiyo. Sibe sesiwazi kahle ama-podcast, sikhiqize amavidiyo, siwadlulisele kubabhali bethu, sikhiqize izindatshana zemithombo ephethwe nabazuzile, bese sihlanganisa imiphumela ngokuzenzakalela encwadini yezindaba yamasonto onke. Lokhu kusebenza kahle kuholela engxenyeni yesikhathi esichithwe ekuthuthukisweni kokuqukethwe futhi kukhulise ukuzibandakanya ngenxa yokuqondanisa kuziteshi.
Izinkampani azidingi ukufuna imali eyengeziwe noma izinsizakusebenza zokumaketha okuqukethwe lapho iningi lokuqukethwe kwazo empeleni ayikhiqizi imiphumela. Uma izinkampani, esikhundleni salokho, zinciphisa ivolumu yokuqukethwe okungakhiqizwa kahle futhi zigxile kokuqukethwe okubandakanyeke kakhulu, okufanele, nokufiswayo, empeleni kungonga isikhathi futhi kwandise umthelela wemizamo yazo.
Ngokuya nge-Content Marketing Institute, Amaphesenti angama-39% ahlela ukukhuphuka ukusetshenziswa kwabo kokumaketha kokuqukethwe ezinyangeni eziyishumi nambili ezizayo
Ngokushintshwa kwezwe kokumaketha kokuqukethwe, ukuhambisana namasu namathuluzi wakamuva sekuyimpoqo, yingakho izinkampani eziningi manje sezihlela ukwenza amasu azo asebenze ngangokunokwenzeka eminyakeni ezayo. Lezi zinkampani zizimisele kakhulu ukusebenzisa imali enkulu ukuxhasa uhlelo lwazo lokumaketha kulo nyaka ozayo. I-GroupM ibikezela ukuthi izindleko eziphelele zezinsizakalo zokumaketha emhlabeni wonke zizodlula esikhathini esedlule $ 1 isigidintathu imibundu okokuqala ngo-2017. Jomer Gregorio, I-Digital Marketing Philippines
Nayi i-infographic efundisayo emangalisayo, Amathrendi Wokumaketha Okuqukethwe kwe-B2B ngo-2017.
Tags: 2017b2bb2b izitayela zokumaketha kokuqukethweukumaketha kwe-b2bizitayela zokumaketha ze-b2bUkukhangisa Okuqukethweizitayela zokumaketha kokuqukethweama-digital marketing philippinesizitayela
I-Localist: Shicilela, Phatha futhi Wenyuse Imicimbi Yakho Ku-inthanethi